Bogga 4 aad by wargeyska313 - Issuu
WARARKA WARGEYSKA DALKA	Madaxweyne Waare oo Muqdisho kula Bannaan-bax kulmay xildhibaannada labada Aqal ku Nabaddeed matalaya Hir-shabeelle. oo ka dhacay Madaxweynaha Dowlad Gobolleedka Soomaaliyeed ee magaalada Hir-sahebeelle Dr. Maxamed Caabudwaaq Cabdi Waare ayaa kulan
kula qaatay Magaalada Muqdisho qaar ka mid ah Xildhibaannada Aqalka hoose iyo sare ee Hirshabelle ku matala Dowladda dhexe. Madaxweynaha iyo Xildhibaannada ayaa waxa ay ka wada hadleen arrimo kale duwan oo quseeya Qaranimada Soomaaliya iyo howlaha horyaalla maamulka Hirshabeelle iyo Sida ay lagama maarmaanka u tahay in la iska kaashado horumarinta Hirshabeelle. Intii kulanka uu socday ayaa waxa sidoo kale ay iska xogwareysteen Xaaladaha amni iyo midda bulsho ee degaannada Hirshabelle, iyo in Xildhibaannada labada aqal ee laga soo doortay Hirshabeelle ay u midoobaan horumarinta iyo dhisidda Dowlad goboleedka si dhowna ay ula shaqeeyaan maamulka haatan jira. Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabelle Dr Maxamed Cabdi Waare ayaa Xildhibaannada u faah
faahiyay muddada Xafiiska uu joogo waxyaabaha u qabsoomay caqabadaha jira, iyo qorshayaasha maamulka u degsan bilaha soo socda, wuxuuna ugu baaqay inay qaataan doorkooda ee ah u shaqeynta bulshada ay matalaan. Sidoo kale qaar ka mid Xildhibaannada ayaa u faah faahiyay Madaxweynaha Socdaal dhowaan ay ku tageen degaanno ka tirsan Hiiraan , iyagoo hoosta ka xariiqay inay muhiim tahay in la xoojiyo wada shaqeynta iyaga iyo Madaxweynaha. Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Hirshabelle oo hadda ku sugan Magaalada Muqdisho ayaa ka qeyb galaya shirka Dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada, waxaana sidoo kale uu kulamo kula qaatay qaar ka mid diblomaasiyiinta beesha Caalamka, kuwaas oo ay ka wada hadleen arrimo ay ka midyihiin horumarinta Hirshabeelle.
Maamulka G/Banaadir oo dhagaxdhigay dhismaha Waddada Via Roma Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Eng. Yarisow), ayaa dhagaxdhigay dayac-tirka Waddada Via Roma ee degmada Xamar-Weyne. Mashruucaan laamiga lagu saarayo waddadan ayaa waxaa iska kaashanaya maamulka gobolka Banaadir iyo bulshada ku dhaqan degmadda. Guddoomiyaha Gobolka ayaa sheegay in la qorsheeynaayo sidii dib loogu dayac tiri lahaa dhammaan waddooyinka kale ee bur-burku soo gaaray, si loo soo celiyo bilicdii iyo quruxdii ay ku tilmaamneyd caasimaddu. “Waxaan rabnaa inaan soo celino bilicdii
Caasimadda, waxana door muhiim ah ka qaadanaya dhismaha jidadka iyo horumarinta adeegyo bulsho dadka degan degmada XamarWeyne”. Ayuu yiri Guddoomiye Yarisow. Guddoomiyaha ayaa ugu baaqay ganacsatada Soomaaliyeed in ay ka qeyb qaataan mashruuca dib-u-dhiska dalka, kaas oo lagu gaari karo horumar dhaxal gal ah. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan ayaa waxaa dhagax-dhigga ku weheliyey qaar ka mid ah guddoomiye ku xigeennada Maamulka Gobolka iyo Xoghayaha guud.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo Joojiyey Dhismaha ka socda Dhulka ka soo horjeeda Dekadda
Guddoomiyaha Gobolka Benaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Eng. Yarisow) ayaa qoray wareegto si rasmi ah u joojinaysa dhismaha sharci darada ah ee ka socda dhulka ka soo horjeeda Dekedda magaalada Muqdisho ee degmada Xamar-Jabab, kadib markii uu warbixin ka dhageystay waaxda dhul bixinta ee gobolka Benaadir. Waxuuna ku wargeliyey
Hay’adaha ay khusayso joojinta hawlaha dhismaha, isagoo tilmaamay in aan loo dulqaadan karin in dhismayaal sharci darro ah laga sameeyo dhulalka danta guud. Duqa Muqdisho ayaa faray maamulka degmada Xamar jajab inay gacanta ku hayaan dhulkaan uu dhismuhu ka socday, waxaana hay’adaha ammaanka wareegtadu ku wargelisay iyagana in ay tallaabo ka qaadaan cid walba oo isku dayda dhismaha
dhulkaan. “Ruux walba oo isku daya in dhulka danta guud ay dhismayaal sharci darro ah ka sameyso tallaabo ayaan ka qaadi doonaa, joojinta dhismaha ka socda dhulka danta guud ee ka soo horjeeda dekedda magaalada Muqdisho waa tallaabo aan uga gol leenahay in dib loogu soo celiyo gacanta dawladda dhulalka danta guud ee ka maqan”.Ayuu yiri Guddoomiye Yarisow. Guddoomiyaha Gobolka Benaadir ahna duqa Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yarisow) ayaa horay u joojiyay dhisme ka socday dhulka danta guud ee Biyaaso Liibaro oo ku yaala Isgoyska Ceelgaabta, waxaana ay tallaabadani qeyb ka tahay qorshe ballaaran oo maamulka ku doonayo in dib loogu soo celiyo dhulalka danta guud ee sida sharci darrada ah loo dhisanayo.
Bannan bax loogu magac daray Daahfurka Maalinta Nabadda ayaa ka dhacay magaalada Caabudwaaq. Mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Gal-mudug oo uu hoggaaminayo Madaxa Golaha xukuumadda Sheekh Maxamed Shaakir ayaa ayaa ka qeybgalay dibadbaxaasi, kuwaasoo u yimid Magaalada Cabuudwaaq, inay la wadaagaan bulshada ku dhaqan Degmadaasi farxadda iyo kala qayb galka daah furka Nabadda. Isu soo bax ay ku muujinayaan jacaylka ay u qabaan Nabadda ayaa magaalada ka qabsoomay, waxaana u bilowday dadaaalka Nabad raadinta Caabudwaaq markii uu socdaalka ku tagay dhawaan Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi “Farmaajo” isagoona ugu baaqay in loo saldhigo Nabadda si horumar loo gaaro, waxaana uu sameeyay Guddi uu u xilsaaray ka miro dhalinta heshiiska. Guddoomiyaha Degmada Caabudwaaq Mahad Cumar Cilmi oo ugu horayn ka hadlay taallada loo asteeyay Nabadda oo bannaan baxu ka dhacay ayaa sheegay in bulshada ku dhaqan Cabuudwaaq ay hormuud u yihiin nabadda iyo horumarka, isagoo tilmaamay in dibadbaxani ay bulshadu ku muujinayeen jaceylka ay u qabaan nabadda iyo dowladnimada. Axmed Maxamed Caafi oo ka mid ah guddi Dawlada dhexe ee dalka u wakiilatay xasilinta Degmada Cabudwaaq ayaa goobta isu soo baxa waxaa uu ka soo jeediyay waxa u qabsoomay intii ay ku guda jireen arrinta xasilinta degmada Caabudwaaq, isagoo ku amaanay reer Cabuudwaaq sida ay ugu bisil yihiin nabadda iyo nidaamka dowliga ah. Soo jeedinta go’aanka xasilinta ee guddiga kadib, waxaa si wada jira u taageeray qodobada qaybaha kala duwan ee bulshada iyo Ugaas Axmed Bari Cali oo tilmaamay iney bulshadu qaadatay nabadda. Ugu dambeyn Madaxa xukuumadda Dawlad Gobolleedka Gal-mudug Sheekh Axmed Shaakir ayaa sheegay in Gal-mudug ay aqbashay go’aanka guddiga xasilinta dhaqan gelintisana ay diyaar u yihiin wuxuuna ka dalbaday bulshada reer Galmudug iney qaataan nabadda maamulkana kala shaqeeyaan arrimaha nabadaynta iyo horumarka.
4 Muqdisho oo Loogu Qabtay Tababar Ku Saabsan Horumarinta Afka Hooyo Isniin 12 February 2018
Akadeemiyo Gobolleedka Afka- Soomaaliga ee “AGA” ayaa tababar ku saabsan habeynta Afka Soomaaliga iyo Suugaantiisaba u qabatay 50 dhallinyaro ah oo daneeyneysa Akhriska iyo qoraalka Afkeena hooyo. Guddoomiyaha Naadiga Akhriska iyo Qoraalka ee Hilin iyo Hayaan C/qaadir Cabdi “Jubba” ayaa uga mahadceliyay Akadeemiyada AGA tababarka ay u qabatay dhallinyarada ka tirsan naadigaasi, wuxuuna kula dardaarmay dhallinyaradaasi in ay ka faa’iideystaan casharrada ay ka qaadanayaan aqoon isweydaarsigan. Qaar ka mid ah dhallinyaradi loo qabtay tababarkaasi ayaa muujiyay sida ay ula dhacsanyihiin aqoon isweydaarsigan ku saabsan habeynta qoraalka iyo akhriska afka Soomaaliga,
iyagoo codsaday in la joogteeyo tababarrada noocan oo kale ah. G u d d o o m i y a a Akadeemiyada AGA Prof. Maxamed Daahir Afrax oo tababarkaasi furay ayaa sheegay in Akadeemiyadu ay dhiirigelineyso cid kasta oo daneyneysa horumarinta Af Soomaaliga, isagoo ku boorriyay dhallinyarada Soomaaliyeed iney u soo jeestaan sare u qaadidda Akhriska iyo qoraalka Afkeena. Tababarkan oo loo qabtay 50 dhalinyaro ah oo isugu jiray wiilal iyo gabdho ayaa la xiriira habeynta qoraalka iyo ku hadalka afka Soomaaliga iyo suugaantiisa, waxeyna arrintani ay qeyb ka tahay qorshayaasha Akadeemiyad goboleedka Afka Soomaaliga ay ku horumarineyso Afkeena hooyo.
Maxkamadda Ciidamada oo xukunno ku riday eedaysaneyaal loo haystay Qaraxii Soobe
Maxkamadda Ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa saaka xukuno kala duwan ku riday eedaysanayaal loo haystay Qaraxii 14 October ka dhacay Isgoyska Zoobe ee Magaalada Muqdisho. Maxkamadda ayaa eedaysanayaasha ku kala xukuntay Dil Toogasho, xabsi daa,in kuwo kalena ay amar ku bixisay in xuriyadooda dib loo siiyo maadaama lagu waayay dambiyadii loo haystay. G u d d o o m i y a h a Maxkamadda Darajada 1-aad ee Ciidamada Qalabka sida G/sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa warbaahinta u aqriyay xukunka, waxaana eedeysanayaasha lagu kala xukumay:1- Xasan Aadan Isaaq Cali, waxay maxkamaddu ku xukuntay Dil Toogasho . 2- C/laahi Ibraahin Xasan
Absuge (Maqane) waxay maxkamaddu ku xukuntay Xabsi Daa,in. 3- C/wali Axmed Diiriye waxay maxkamaddu ku xukuntay 3(sedax) sano xabsi ciidan ah. Sidoo kale, waxay maxkamaddu amraysaa in xabsiga laga sii daayo eedeysanayaal: 1- Muqtaar Max’ud Xasan Rooble . 2- Cabdul Cabdi Warsame Cali Hore ayeey Maxkamadda u dhageystay ilaa 2-jeer kiiskan oo saacada badan qaatay, waxaana ugu dambeyn maanta lagu dhawaaqay go’aanka Maxkamadda iyadoo Maxkamadda fursad kale hor dhigtay eedeysanayaasha oo ay rafcaan ku qaadan karaaan.
Bogga 4 aad